Dakhliga Degmada Doolo-Bay - Cakaara News
Dakhliga Degmada Doolo-Bay
Doolo-bay(Cakaaranews )Sabti 16ka April 2016, Sidaan wada ogsoonahayba wadan walba horumarkiisa iyo dhaqaalihiisuba wuxuu ku xidhanyahay Dakhliga u soo xarooda iyo waxsoosaarka uu sameeyo. sidaas darteed waxaa 5tii sano ee u danbaysay kor u kacay dakhliga u soo xarooda DDSI kadib markii la xoojiyay ilaha dakhliga, wacyigalintii bulshada, waxsoosaarka beeraha iyo waliba Shaqo abuurka bulshada qaybaheeda kaladuwan.
Hadaba Maareeyaha Wakaalada Dakhliga Degmada Doolo-bay mudane Maxamuud Cabdi Cismaan oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in hawlaha dakhli dhalinta iyo dakhli xarayntuba ay meel fiican kamarayso dagmada. Wuxuuna intaa kudaray masuulku in xidhiidhka wada shaqayneed ee u dhaxeeya wakaalada iyo bulshada degmada Doolo-bay uu aad u fiicanyahay kadib markii ay u sameeyeen shirar wacyigalin ah oo joogto ah iyo wadatashiyo kaladuwan. Wuxuuna masuulku intaa kudaray in bulshada dagmada doolo-bay ay fahan buuxa kahaystaan hawalaha dakhliga.
Dhinacakale maareeyaha ayaa xusay in Qorshi hii wakaalada Dakhliga u yiilay 9ka bilood uu ahaa inay soo xarayso 9,098,282, birr waxayna soo xaraysay dakhli dhan 6,580,252 birr. taasoo u dhiganta inay wakaaladu fulisay 83% qorshihii u yiilay.
Ugu danbayna wuxuu tilmaamay in ay ku rajawayn yihiin in 100% ay ku guulaysanayaan fulinta qorshayaasha xiga kan, isagoo u mahadceliyay maareeyuhu dhamaan shaqaalaha iyo hawl wadeenada wakaalada dakhliga Degmada doolo-bay iyo waliba qaybaha kaladuwan ee bulshada kudhaqan degmada.